Top 6 Fiaran-tsakafo matory Eropeana Ho fitsangatsanganana | Save A Train
Home > Travel Europe > Top 6 Fiaran-tsakafo matory Eropeana Ho fitsangatsanganana
Nandeha lamasinina, Train Travel Austria, Train Travel Belzika, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby any Soeda, Fiaran-dalamby Switzerland, Train Travel UK, Travel Europe
Efa nieritreritra ve ianao hoe ahoana izany mahatsapa tahaka ny jeren'ny, sakany-maso, avy sary lehibe varavarankely toy izao tontolo izao Rambon-danitra misy amin'ny alalan'ny? Ahoana ny rehefa lulled ny torimaso ny tapaka hohozongozonina ny lamasinina araka ny trundles nidina ny lalana? Train Tsidika dia fomba mahazatra fitaterana fahita any Eropa, ary angamba ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanaovana izany dia amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby ny natory. Ireo fiarandalamby, izay matetika mandeha amin'ny tolakandro ka mandehandeha mandritra ny alina, manolotra traikefa miavaka avy amin'ny fenitra traikefa amin'ny dia fiaran-dalamby. Izahay efa tafangona ny fiaran-dalamby natory tsara indrindra any Eoropa ho anareo. Avy Italia ho any Frantsa, eto ny enina manaraka misy ny lamasinina eropeana ataontsika.
Train Fitaterana NO Eco-Friendly Way To Travel. Ity lahatsoratra ity dia nosoratana mba hampianatra momba Train Travel ny Save A Train, Train mora indrindra Tickets Website In The World.
Raha nanonofy ianao ny nanandrana ny tany italiana italiana, natory ity fiaran-dàlamby no iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanaovana izany. Na dia ny fiaran-dalamby dia maka fotoana roapolo ora manomboka eo aorian'ny famaranana, ny fiaran-dalamby dia mivantana ary misy isan-karazany ny safidy ho an'ny natory cabins. Tapakila ihany koa misy alalan'ny Thello, izay mandeha tapakila mankany Venice ihany koa.
Raha izay tadiavinao hamonjy vola, afaka misafidy couchette olona efatra ianao, izay miasa ho toy ny karazana Mini natory safidy. Na izany aza, raha izay tadiavinao mba haka lehibe voarindrina-maso, Afaka misafidy ny manasaraka kabin'olon-tokana miaraka amin'ny namana ianao – na dia olon-tsy fantatra, ary ny tapakila ho lany eo ambany 50 Euro. Izany fifanarahana fa ny downright! Raha izay tadiavinao hanana bebe kokoa toe-javatra Deluxe, dia afaka mitahiry iray ihany koa ny natory valo-polo ho eo ambanin'ny euro. Na dia tsy nahita de tariny trano, ho afaka hankafy milamina amin'ny fandriam-pahalemana ianao amin'ny vidiny mora.
Io fitsidihana mahita be dia be no mampitondra faisana ny Italia, toy ny mila anao tsy Milan rehetra ny lalana mankany amin'ny tendron'ny ravin-firenena Kiraro. Teny an-dalana, hahazo vistas mamakivaky ny morontsiraka sy ny havoan'i Tuscany ianao. izany no, mazava ho azy, ho fanampin'ny sarivongan'i Roma sy ny tantarany.
Ny faharoa ny tsara indrindra pick natory lamasinina any Eoropa no mihazakazaka avy any Zurich, Soisa ho any Hamburg, Alemaina. If you’re looking for a sleeper train service, ianao te-handinika ny Nightjet. Raha misy safidy maro tsy an-kiato azo fiaran-dàlamby ity, dia azonao atao ny handinika ny lalana mandeha amin'ny alalan'ny izay manome anao miova. Ny ambanivohitra dia tsara tarehy, ary ny fiaran-dalamby mandalo tanàna kely maro teny an-dalana, anisan'izany ny tanànan'i Hanover. Ireo tanàna dia mendrika ny nijanona eo amin'ny diany raha ny fotoana. Aza adino ny mahatalanjona hevitra ny Alps dia ho tsapanao ihany koa.
Tsara kokoa, Rehefa efa nanao ny fomba Hamburg ianao tsy lavitra avy any Berlin. Ny renivohitra Alemanina amin'izao fotoana izao dia fantatra amin'ny takam-baravaran'ny hip ary ny fanoloran-tena tanteraka amin'ny kolontsain-hipster. Ankafizo ny kanto an-dalambe sy kafe lehibe rehefa misaintsaina ny sisa tavela amin'ny rindrina any Berlin.
Ny Bruxelles ny Vienna Eoropa natory fiaran-dalamby dia malaza lalana mampitohy Belzika ho any Aotrisy. Miankina amin'ny fiaran-dalanao nofidianao, mihazakazaka manomboka amin'ny tolakandro ary tonga maraina maraina, ary efatra ambin'ny folo ora izao’ Travel fotoana. Izany no mora kokoa ny vavony noho ny, milaza, ny ora roapolo takian'ny alàlan'ny lamasinina amin'ny alina manomboka any Milan ka mankany Palermo.
Noho izany fe-potoana fohy ho an'ny lalamby Tsidika, dia tsy mila maharitra amin'ny fisakafoana overlong fiara, na dia azonao atao aza ny mankafy ny kojakoja natolotr'ireo kilasy samihafa.
Vantany vao any Vienna ianao dia afaka niainana ny kolontsaina kafe tena izy, satria efa nanangana ny tenany ho foiben'ny kafe eropeana i Vienna.
Io tambazotra malaza mihazakazaka inenina isan-kerinandro. Antsoina koa hoe ny Caledonian Sleeper, ity serivisy fatoriana ity dia mampifangaro haitraitra amin'ny fahombiazan'ny vidiny. Afaka mahita efaha amin'ny isam-izay ahitana ny sakafo, zava-pisotro, ary mazava ho azy, efitra fatoriana.
Raha izay tadiavinao hitsidika London mandritra ny diany, dia afaka misafidy ny handray foana ny Eurostar avy any amin'ny tanibe Eoropa. Izany is a price-fomba mahomby sy tsotra mba hahatonga ny dia manerana ny fantsona avy any Frantsa ho any Angletera. Tapakila ihany koa misy avy amin'ny toeran-kafa, toa an'i Amsterdam.
Raha toa ianao mitady ny antony mba haka izany lalana, tadidio fa i Edinburgh no tranon'i Harry Potter, ny malaza JK Rowling fananganana ny. Azonao atao ihany koa ny mahita lalan-kely mankany amin'ny havoana, toy ny Fort William, fa marina Scottish traikefa. Miasa ho antsika io!
Mendri-kaja Milazà 5: Paris To Munich
Raha ara-teknika io dia io dia tsy mendrika ho toy ny làlam-pandriana torimaso, satria tsy ahitana feno Nampatorinay matory, mandeha amin'ny làlana maro isan'andro izy io.
Mazava ho azy, Paris dia ny tanàna ny jiro ary iray amin'ireo tantaram-pitiavana indrindra tanàna eto an-tany, noho izany dia tokony tanteraka baolina ny toerana eo amin'ny Eoropeana vakansy. Marina izany, na izany ny fitsidihana voalohany na ny jato.
Mandritra izany fotoana izany, Munich no an-trano ny Oktoberfest. Io fetibe mitranga ho iray ny favoris fotoana rehetra – fa ny zava-nitranga an'arivony baranahiny. Amin'ny mpanatrika an'arivony isan-taona sy ny plethora ny asa izay hifidy, Munich dia mendrika mendrika toerana eo amin'ny lisitry ny lisitra.
Mendri-kaja Milazà 6: Copenhagen To Berlin
Izany no mendri-kaja iray hafa miresaka noho ny fiaran-dalamby natory nonstandard traikefa, fa mendrika ny fotoana fotsiny izany satria hitanao ny tenanao mamakivaky ny tanimbary mahafinaritra indrindra any Eropa. Danemark no tsy manam-paharoa fifangaroana ny skandinavianina hery miasa mangina sy ny Tanibe ny kolontsaina sy ny Eoropeana dia tsy mba ho hita. Manomboka akaiky be ihany koa ny lalana Malmo, izay tanàna mahafinaritra hotsidihina ary ny fahatelo lehibe indrindra any Soeda.
Na dia tsy hahita matory feno berths izany fiaran-dalamby, ho hitanao fa misy takelaka amin'ny alina isan'andro. Izany dia hanome fahafahana anao hiala amin'ny alina, ary tonga maraina namelombelona ho amin'ny andro ho avy. Fa ny tsara indrindra traikefa amin'ny tsy natory fiaran-dalamby, te hitahiry tapakila kilasy voalohany ianao. Ireo matetika tapakila avy amin'ny mitombo perks fanampiny toy ny entana, Anisan'ny sakafo, ary traikefa momba ny kabinetra manokana.
Rehefa mandeha mitety lalana Eoropa amin'ny lamasinina potika tanteraka ianao amin'ny safidy. Na izany tany Ekosy na Espaina, Norvezy, na Soeda, natory fiarandalamby ny sasany amin'ireo asa tsara indrindra manodidina ny tonga ny ampitso maraina namelombelona sy vonona ho amin'ny andro ho avy. Raha mbola manana ny plethora ny safidy misy anao, toy ny hotely lamasinina na natory natory lavitra any Prague, Polonina, Lisbon, na i Moskoa aza, manao ny tenanao ho famindram-po, ary namely ireo natory enina ambony fiaran-dalamby any Eoropa fa tsy. Dia tsy ho miala tsiny!
Travel amin'ny alina sy vakio ilay boky Save A Train!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “Top 6 Fiaran-tsakafo matory Eropeana Ho fitsangatsanganana” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary manome antsika voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsleeper-trains-europe%2F%3Flang%3Dmg Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Ao amin'ny rohy manaraka ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- ity rohy ity dia ho an'ny teny Anglisy làlana fiantsonana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, ary azonao atao ny manolo ny es ho fr na de sy ny fiteny maro hafa nofidinao.
#lalan-alina EuropeTraveling NightTrains SleeperTrains Train Travel